Nihitsoka tao Korea Nandritra ny Telo Taona Ity vehivavy ity Tamin’ny Fiezahana Hody Any An-Tanindrazany Any Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2016 8:07 GMT
Ity tantara nosoratan'i Kaomi Goetz ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 17 Novambra 2016. Naverina nozaraina eto tao anatina fifanarahana-fifampizarana votoaty.
Nanomboka tamin'ny taona 1950, ankizy mihoatra ny 160.000 avy any Korea Atsimo no natsangana olona avy amin'ny firenena hafa. Ny ankamaroan'ireo firenena nandray dia nandeha ho azy ny fanomezana zom-pirenena, afa-tsy iray ihany: i Etazonia. Namorona lavaka be ho an'ny sasany izay tsy nahazo ny zo tokony ho azony izany dingana izany. Tamin'ny volana lasa teo, zaza Koreana iray natsangana, Adam Crapser, no very zo ahafahany mijanona ao Etazonia ka tokony nalefa nody tany Korea Atsimo — firenena iray izay nilaozany 40 taona lasa izay fony izy mbola 3 taona — satria koa izy dia tsy nahazo zom-pirenena mihitsy.
Tamin'ny 2001, niova ilay lalàna noho izany tokony ho lasa olom-pirenena ho azy ireo zaza natsangana. Fa tsy nihatra izany ho an'ireo mihoatra ny 18 taona tamin'izany fotoana izany, toa an'i Kim Craig, Adam Crapser, ary ireo maro hafa. Misy soso-kevitra hanamboarana izany fahabangàna izany.